LED Garden Light ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | Ming Feng
MF က Gear ကိုဘယ်လိုထုတ်လုပ်သလဲ။
MF ဘယ်လို soldering?
MF သည် SMT Chip ကိုမည်သို့ပြုလုပ်မည်နည်း။
မိုးလုံလေလုံ Led အလင်း
မြင့်မားသောပင်လယ်အော်အလင်း ဦး ဆောင်ခဲ့သည်
Tri- အထောက်အထားအလင်း ဦး ဆောင်ခဲ့သည်
အပြင်ဘက်တွင် Led အလင်း
မြင့်မားသောရွက်တိုင်အလင်း ဦး ဆောင်ခဲ့သည်
Led Wall washer အလင်း
ဘရာဇီးတွင် Mini Down Light Project
CNC နှင့် polishing ကို MF ကဘယ်လိုလုပ်သလဲ။
ဘယ်လို MF အိုမင်းတာလဲ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဖောက်သည် Mf သို့လာရောက်လည်ပတ်
အစ္စရေး Mf သို့အလည်အပတ်ခရီး
နယ်သာလန် Mf သို့သွားရောက်
Mf Gz Lightingfair သို့သွား
Mf အင်ဂျင်နီယာများသည် Eu သို့လာရောက်လည်ပတ်သည်
Hz ခုနှစ်တွင် Mf သင်တန်း
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Mf လမ်းပြမြေပုံ
ဂျပန်လိုင်း Mf သို့အလည်အပတ်ခရီး
အီတလီကန်ထရိုက်တာ Mf သို့အလည်အပတ်ခရီး
Mf Bbc ခံစားပါ
MF ထုတ်လုပ်မှုစနစ်သည် ISO9001 ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားခေါ်ပါ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > အပြင်ဘက်တွင် Led အလင်း > ဦး ဆောင်ဥယျာဉ်အလင်း
LED ဥယျာဉ်မှူး Lead Lead Lead Weed Wealard Light သို့မဟုတ် Courtyard Lamp ၏နောက်ထပ်အမည်ကို Ming Feng Lighting Facting တွင်6နှစ်ကျော်ကြာ ဦး ဆောင်ခဲ့သည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ကို6နှစ်ကျော်ကြာသော0တ်စုံမီးတောက်ရုံတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့'ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးနှင့်ပိုမို ထပ်. ပိုများလာလိုသည်။
Courtyard မီးခွက်သည်ပြင်ပအလင်းရောင်ဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်6မီတာအောက်ရှိပြင်ပလမ်းပြမြေပုံကိုရည်ညွှန်းသည်။ သို့သော်၎င်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများမှာ - အလင်းအရင်းအမြစ်, မီးခွက်, မီးခွက်တိုင်, မီးအိမ်, မီးတိုင်တိုင်,
ဝင်းဝင်းမီးခွက်သည်မတူကွဲပြားမှု, အလှအပ, အလှအပနှင့်အလှဆင်ခြင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုရှုခင်းဥယျာဉ်တော်ဆီသို့လည်းဖြစ်သည်။ လူတို့၏အချိန်တိုးချဲ့နိုင်သည့်နှေးကွေးသောလမ်းကြော, လူနေအိမ်ရာ, ပန်းခြံ, စတုရန်း, စတုရန်း, စတုရန်း, စတုရန်း, စတုရန်း, စတုရန်း,'S ၏ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၏လုံခြုံမှုကိုတိုးတက်စေသည်။